NCS မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများရဲ့လူငယ်များနှင့်မိဘ / အုပ်ထိန်းသူများအဘို့ - Element ကို Society က
အဘယ်မှာရှိငါ့အ program ကိုအရပျကိုယူကြမည်နည်း
ငါသည်ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ NCS မှ sign up ကိုနိုင်သလား?
အဆိုပါထုပ်ပိုးစာရင်းကျွန်တော်တို့ဟာ * အတည်ပြုခဲ့သည်သောနေရာများနှင့်အတူလူငယ်များနှင့်သူတို့၏မိဘများ / အုပ်ထိန်းသူများထံသို့ပေးပို့သော NCS နွေရာသီ / ဆောင်းဦးရာသီလမ်းညွှန်များတွင်ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့အစီအစဉ်မစတင်မှီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်လဤအထွက်ပေးပို့ပါ။
သငျသညျသေးသင့်ရဲ့ NCS နွေရာသီ / ဆောင်းဦးရာသီလမ်းညွှန်ပေးခံကြလျှင်, သင်ထုပ်ပိုးစာရင်းပါဝင်သောအွန်လိုင်းမှဗားရှင်းကိုမြင်ရဖို့အောက်က link ကို click နှိပ်ပြီးနိုင်ပါတယ်။
NCS နွေရာသီ 2017 လမ်းညွှန်
သငျသညျသငျနှငျ့အတူတစျခုခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာနှင့်တနေ့အိတ်ရောက်စေဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ မဆိုအပိုဆောင်းအိတ်ကျန်ရစ်ခံရဖို့ရှိသည်, ဒါကြောင့်အိတ်န့်သတ်ချက်အတွင်းနေထိုင်ကျေးဇူးပြုပြီးပါလိမ့်မယ်။ ကန့်သတ်အိတ်အာကာသကြောင့်ကြီးမားတဲ့ခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာကို အသုံးပြု. ရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ။
လူငယ်များ NCS ပေါ်သို့ထိုကဲ့သို့သောအရက်အဖြစ်မည်သည့်တားမြစ်ထားသောပစ္စည်းများ, မည်သည့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးတရားမဝင်ပစ္စည်းများ, penknives သို့မဟုတ်လက်နက်များယူဆောင်လာသင့်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကဤပစ္စည်းများကိုမဆို၏အပိုင်အတွက်ဖြစ်တွေ့ရှိလျှင်အကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည်အဖြစ်ကဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လူငယ်တွေကိုမေးကြည့်ပါ။
ကျနော်တို့ကိုယျပိုငျပစ်စညျးအာမခံထားနိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့စျေးကြီးပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အဖိုးတန်မလိုအပ်သောမဆောင်ခဲ့ပါဘူးဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကို NCS အစီအစဉ်ကိုဗြိတိန်အတွင်းရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
ယခင်နှစ်များတွင်လူငယ်များအတွက်အစီအစဉ်အဆင့် 1 များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောစကော့တလန်, Cumbria, Kent နှင့်ဝေလနယ်အဖြစ်နေရာများတွင်သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။
အဆင့်2နှင့်3များသောအားဖြင့်မကြာခဏသူတို့ရဲ့နေအိမ်သို့မဟုတ်ကျောင်းထဲကနေနယျလှညျ့အကွာအဝေးအတွင်း, ထိုလုလင်သည်လူတစ်ဦး၏ဒေသခံဧရိယာမှပိုနီးတည်ရှိနေကြသည်, သို့သော်ဤကွဲပြားပါဘူးနှင့်လူငယ်များနေအိမ်ထဲကနေနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်တန်းသားများကိုများသောအားဖြင့်အတွင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာဧရိယာအနီးအပါးဖြစ်သောအစည်းအဝေးအမှတ်သွားရောက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဝေးဖြစ်ကြောင်းဆိုနေရာများမှလူငယ်များယူခရီးသွားစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ လူငယ်များနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူများအစည်းအဝေးအချက်များနှင့်၎င်းတို့၏အချိန်ဇယားအပေါ်ပြကြိမ်မှာပြန်လာအချက်များမှမိမိတို့ခရီးသွားစည်းရုံးရေးတာဝန်ရှိသည်။
လူငယ်များသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ sign up ကိုနိုင်ပြီး, သူတို့ကအတူတူပင်ဧရိယာထဲမှာအတူတူနေ့စွဲလျှောက်ထားခြင်းနှင့်အတူတူပင်အဆင့်2ကျွမ်းကျင်မှုကို select လျှင်, သူတို့သည်တူညီသောအစီအစဉ်ဖြစ်ခြင်း၏ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးတာနဲ့လူငယ်တွေတူညီတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အခန်းတစ်ခန်းမျှဝေဖို့တောင်းဆိုနေတာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီမိတျဆှေများ၏အမည်များကိုသိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကျနော်တို့ပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဤယူကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြုလိမ့်မည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤအာမခံချက်မပေးနိုငျပမေယျ့, စောစောထလက်မှတ်ထိုးသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်မည်!
NCS လူသစ်ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ! ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစစ်ဆေးပါ။
အတော်များများကလူငယ်များသူတို့မိတ်ဆွေများထံမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအဖွဲ့သို့မဟုတ်လှိုင်းပေါ်မှာနေရာချစပြီသော်လည်း, ထိုအစီအစဉ်ကိုအသင်းအဆောက်အဦလှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့်နဲ့သူတို့ရဲ့အကြီးတန်းဆရာသူတို့ကမသေချာအခါအပေါ်အမှီဖို့အလွန်ကြီးစွာသောလူတစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာလူသစ်တွေ့ဆုံနိုင်ရန်လည်းအထောက်အကူပြုကြောင်းရှာပါ။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်တွင်တစုံတယောက်သောသူသည်ကျောင်းမှလူငယ်များ၏အချို့သောအရေအတွက်ကသာခွင့်ပြုသောကြောင့် program ကိုအများအပြားလူငယ်များအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ program ကိုတစ်လျှောက်လုံးနှင့်အထူးသဖြင့်အစအဦးမှာပါ, လူတိုင်းကသူတို့အသင်းအတွက်အခြားလူငယ်များကိုသိရန်ရရှိသွားတဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်အများအပြားအဖွဲ့ကဂိမ်းများနှင့်ရေခဲခွဲသင်္ဘောရှိရလိမ့်မည်။
ထို့ပြင်များစွာသောလူငယ်များ NCS အစီအစဉ်၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှဤမျှလောက်များစွာသောလူသစ်တွေ့ဆုံနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အောင်ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်သင်တန်းသားများကို '' အတှေ့အကွုံအချို့ကိုတွေ့မြင်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်ကိုများအတွက်အဖွဲ့များပရိုဂရမ်ကိုစတင်နေ့စွဲမတိုင်မီကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲသာခွဲဝေရှိပါသည်အဖြစ်လူငယ်များအတွက်ထားရှိပါလိမ့်မည်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုငျဘူး။ လူငယ်တွေကသူတို့အစီအစဉ်၏ပထမဦးဆုံးနေ့၌အတွက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအသင်းအထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ NCS အစီအစဉ်ခွင့်ပြုခဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြစ်ပါသလား
လူငယ်များသည် NCS အစီအစဉ်သူတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများ (နှင့်အားသွင်း) ကိုရောက်စေဖို့ခွင့်ပြုနေကြတယ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများအရပျကိုယူပြီးကြသည်မဟုတ်သည့်အခါသူတို့ကိုအသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မည် (လှုပ်ရှားမှုအချိန်ကာလအတွင်းမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးပြီးခွင့်မပြုပါ) ။ အမြဲအထူးသဖြင့်များသောအားဖြင့်ကျေးလက်တွင်အခြေစိုက်သောအဆင့် 1 စဉ်အတွင်း, မိုဘိုင်းဖုန်းကိုဧည့်ခံမျှမရှိစေခြင်းအလိုငှါသတိပြုပါ။
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းမည်သို့ပင်၎င်းတို့၏အထူးအစီအစဉ်နေရာထိုင်ခင်းအမျိုးအစား၏, သင်တန်းသားများကိုပါဝါခြေစွပ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဒါသူတို့ရဲ့ဖုန်းများအားသွင်းနိုင်ဖြစ်သင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုပါဝါခြေစွပ်, ရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းမှလက်လှမ်းအဖြစ်လိုအပ်သောသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူကြွလာ။ Access ကိုရွက်ဖျင်နေရာထိုင်ခင်းသည်အလွန်ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဒါသူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများကိုဆောင်ခဲ့သောသူလူငယ်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာအဲဒီလိုကိုယျပိုငျပစ်စညျးအာမခံထားနိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။
အဘယ်သူမျှမငယ်ရွယ်လူအိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်ရောက်စေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ရွက်ဖျင်နေရာထိုင်ခင်းများနှင့် yurts အပါအဝင်အိပ်ယာနှင့်တကွကြွလာ။ ငါတို့သည်လည်းလူငယ်များအပိုင်း 1 စဉ်အတွင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသောနေ့ချင်းညချင်းစခန်းအိပ်ယာသည်။
(လူငယ်များအိမ်ကနေတည်းခိုကြသောအခါ) အားလုံးအစားအစာနှင့်သောက်သည့်အစီအစဉ်၏လူနေအိမ်အစိတ်အပိုင်းများစဉ်အတွင်းပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်သာအဆင့် 1 ၏ပထမဦးဆုံးနေ့အဘို့တစ်ဦးထုပ်ပိုးနေ့လယ်စာဆောင်ကြဉ်းဖို့လိုအပ်ပါ (အစီအစဉ်များပေါ် မူတည်. နှင့်အဆင့် 2, သင့်အချိန်ဇယားစစ်ဆေးပါ) ။
နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့ကြိုတင်ငယ်ရွယ်လူတစ်ဦး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အကြောင်းကိုအသိပေးနေကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့ဟလာလ်, kosher, သက်သတ်လွတ်, သက်သတ်လွတ်နှင့် gluten-အခမဲ့အစားအသောက်အပါအဝင်အစားအသောက်လိုအပ်ချက်, အဘို့နှင့်အမျိုးမျိုးသောအစားအသောက်ဓာတ်မတည်များအတွက်အများဆုံးအထူးအစားအစာပေးနိုင်ပါသည်။ ဤတွင်လူနေအိမ်အစိတ်အပိုင်းများစဉ်အတွင်းရရှိနိုင်အစားအစာများဥပမာဖြစ်ကြသည်။ Options ကိုကွဲပြားပါလိမ့်မယ်:
အဆင့် 1 (လူနေအိမ်):
နံနက်စာ: သီးနှံ, ချက်ပြုတ်နံနက်စာ, ဂျုံယာဂု
နေ့လည်စာ: အသားညှပ်ပေါင်, ပြတ်သား, အသီး
ညစာ: ပူပြင်းတဲ့မုန့်ညက် (ဥပမာခေါက်ဆွဲ, ပီဇာ, ဟင်း, ငရုတ်သီး), သုပ်, အချိုပွဲ
အဆင့်2(လူနေအိမ်)
နံနက်စာ: သီးနှံ, ကင်
ညစာ: အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ပူအစားအစာများ၏ရွေးချယ်ရေး (ဥပမာဝက်အူချောင်းနှင့် mash အာလူး, နှိုးဆော်-ကြော်, ပီဇာ)
အဆင့်3(Non-လူနေအိမ်)
အဆင့် 1 (လူနေအိမ်)
အဆင့်2နှင့်3(ညအချိန်တွင်အိမ်တွင်တည်းခိုလှုပ်ရှားမှုရက်)
ဘယ်လောက် NCS အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူကုန်ကျပါသလဲ?
အဲဒီမှာ NCS စဉ်အတွင်းရရှိနိုင်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ (ဥပမာသီးခြားအဆောင်ခန်း, ရွက်ဖျင်တဲ, yurts, ဒါကြောင့်အပေါ်) ၏အကွာအဝေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သီးခြားနေရာထိုင်ခင်းအစီအစဉ်ကိုအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်ကိုများအတွက်နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်တည်နေရာအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေ့စွဲမတိုင်မီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်လသင်တန်းသားများစေလွှတ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါနေရာထိုင်ခင်းတစ်ဆောင်စိစစ်ပြီးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုစင်တာ, တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းသို့မဟုတ်အခြားနေရာထိုင်ခင်းပေးသူများကထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နှင့်လုံခြုံရေး features တွေကိုတတ်နိုင်သမျှဘေးကင်းလုံခြုံအဖြစ်က၎င်း၏နေထိုင်သူများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိရာအရပျထဲမှာရှိပါတယ်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုတစ်ခုတည်းကျားနေရာထိုင်ခင်းသို့ကွဲကွာကြသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုအခြားသူများ '' ခန်းဝင်ခွင့်ပြုမထားပေ။
နေရာထိုင်ခင်းထိုကဲ့သို့သောရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့်အာဏာခြေစွပ်မှဝင်ရောက်ခွင့်အဖြစ်လိုအပ်သောသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူကြွလာ။ ရေချိုးခန်းအပါအဝင်တချို့ကနေရာထိုင်ခင်း, အခြားလူငယ်များနှင့်အတူမျှဝေစေခြင်းငှါပေမယ့်မှသာတူညီကျား၏သင်တန်းသားများနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။
လူငယ်များအိပ်ပျော်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်မရှိ set ကိုအချိန်လည်းရှိ၏ပေမယ့်, အားလုံးလူငယ်များ 10.45pm ခြင်းဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ဖြစ်ရပါမည်။ ကျနော်တို့လူငယ်များသူတို့အပြည့်အဝလာမည့်ရက်ပေါင်းလှုပ်ရှားမှုများပျော်မွေ့သေချာစေရန်အကောင်းတစ်ဦးညဥ့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်း get အကြံပြု!
အဆင့် 1 စဉ်အတွင်းလူငယ်များကျေးလက်ဒေသအတွက်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုဗဟိုဌာနမှာနေဖို့။ နေရာထိုင်ခင်းအမျိုးအစားကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဒါဟာနေ့ချင်းညချင်းစခန်းချနေထိုင်မည့်ခရီးစဉ်နှင့်အတူဆောင်, ဖြစ်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းရွက်ဖျင်တဲသို့မဟုတ် yurts ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစတင်နေ့စွဲမတိုင်မီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်လသင်တန်းသားများစေလွှတ်လိမ့်မည်။
အဆင့်2စဉ်အတွင်းလူငယ်များနေအိမ်ထဲကနေပျောက်တည်းခိုခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာများချက်ပြုတ်ခြင်းဖြင့်လွတ်လပ်သောလူနေမှုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ တနည်းကား, နေရာထိုင်ခင်းအစီအစဉ်များ (ဥပမာ, ကတက္ကသိုလ်စတိုင်နေရာထိုင်ခင်းသို့မဟုတ်ရွက်ဖျင်တဲသို့မဟုတ် yurts ဖြစ်နိုင်သည်) ကွဲပြားစေခြင်းငှါ, တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်အတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေ့စွဲမတိုင်မီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်လသင်တန်းသားများစေလွှတ်လိမ့်မည်။ အဆင့်3စဉ်အတွင်းလူငယ်များတစ်ခုချင်းစီကိုညဥ့်အိမ်မှာတည်းခိုလိမ့်မည်။
အဆင့် 1 စဉ်အတွင်းလူငယ်များကျေးလက်ဒေသအတွက်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုဗဟိုဌာနမှာနေဖို့ပါလိမ့်မယ်။ နေရာထိုင်ခင်းအမျိုးအစားကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဒါဟာနေ့ချင်းညချင်းစခန်းချနေထိုင်မည့်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ, ဆောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ပါက yurts (ပတ်ပတ်လည်တဲများ), သို့မဟုတ်ရွက်ဖျင်နေရာထိုင်ခင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစတင်နေ့စွဲမတိုင်မီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်လသင်တန်းသားများစေလွှတ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းနှင့်အာဏာခြေစွပ်အဖြစ်အားလုံးလိုအပ်သောသာယာအဆင်ပြေမှုများ, မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပရိုဂရမ်ကို (အဆင့်2နှင့် 3) ၏ကျန်စဉ်အတွင်းလူငယ်များတစ်ခုချင်းစီကိုညဥ့်အိမ်မှာတည်းခိုလိမ့်မည်။
ပြန်ကြားရေးညနေပိုင်းသင်တန်းသားများနှင့်မိဘသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်း NCS အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကရဖို့ရန်နှင့်ပရိုဂရမ်အကြောင်းကိုသူတို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုမေးခွန်းများမေးရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကသူတို့ကိုအခြားလူငယ်တူညီတဲ့အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလူများ, နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့သင်နေရာကိုအတည်ပြုသည့်အခါတစ်ဦးပြန်ကြားရေးညနေပိုင်းဘို့ဖိတ်ခေါ်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ program ကိုစတင်သည်မှီကများသောအားဖြင့်2ရက်သတ္တပတ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ယခင်သင်တန်းသားများကသော်လည်းဖို့မသင်မနေရမဟုတ်ဘူး, ကအလွန်အသုံးဝင်သောတွေ့ပြီသကဲ့သို့သင်တို့ကိုတက်ရောက်ဖို့ကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်လျှောက်လွှာပေါ်တွင်ရွေးချယ်ထားသော preference ကိုပေါ် မူတည်. အီးမေးလ်ဖြင့်သို့မဟုတ်တိုင်အနားမှာပရိုဂရမ်ကိုစတင်နေ့စွဲမတိုင်မီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်လကိုလမျးညှနျသငျသညျအသေးစိတျနွေရာသီ / ဆောင်းဦးရာသီပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်အရည်အချင်းပြည့်မီ 15-17 တစ်နှစ်ကြားရှိ NCS အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူထိုက်ကပိုက်ဆံအဘို့ကြီးသောတန်ဖိုးကိုကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ကျနော်တို့ Program ကိုသငျသညျ NCS အဆိုပါစိန်ခေါ်ဒါမှမဟုတ် NCS Trust မှတဆင့်လျှောက်ထားရန်ရှိမရှိ, သင်က£ 1,000 အုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေထက်မပိုကုန်ကျကြောင်းသေချာစေရန်နိုင်အောင်အစိုးရပါဝင်သူတစ်ဦးလျှင်£ 50 ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ သင်တန်းသားများကိုဖုံးလွှမ်းအားလုံးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအိမ်ကနေအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ ဤသည်နေရာထိုင်ခင်း, အစားအစာ (အခါ, တစ်ဦးလူနေအိမ်အဆင့်အပေါ်) နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့မကြာခဏကျွန်တော်သွားရောက်ကြည့်ရှုသောကျောင်းများအတွက်အထူးကမ်းလှမ်းချက်သည်။ သငျသညျဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အဆိုပါစိန်ခေါ်သူတို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ယူ. NCS ထဲကအကောင်းဆုံးရရန်ခွင့်ပြုပါရန်စိန်ခေါ်မှုအပြုအမူနှင့်အတူသူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်တော်တစ်ဦးနုပျိုလူတစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့နယ်နိမိတ်အောက်ပါနှင့်အတူအခက်အခဲရှိကြောင်းပြောသည်နေတယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကဒီဆှေးနှေးဖို့မိဘသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့ကျောင်းတွေ, ပညာရှင်များသို့မဟုတ်အခြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ထိုလူငယ်လူတစ်ဦးနှင့်မည်မျှထောက်ခံမှုသူတို့ NCS အပေါ်လိုအပ်နိုင်ပါသည်အကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ထံသို့လာကြ၏။ လိုအပ်လျှင်, ငါတို့သည်ထိုလုလင်သည်လူတစ်ဦးအဘို့အရာဌာန၌အပိုဝန်ထမ်းထောက်ခံမှုထားမည်။
သူတို့ကငယ်ရွယ်သူတစ်ဦးနှင့်မြေတပြင်လုံးအသင်းကိုထောက်ပံ့နိုင်အောင်အားလုံးကိစ္စများတွင်, ငါတို့မဆိုစိန်ခေါ်အပြုအမူ၏သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသတိထားမိပါလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းကငျြ့နေတဲ့ကုဒ်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အစီအစဉ်၏အစမှာလူငယ်တွေကိုဒီကိုရှင်းပြခြင်းနှင့်ငါတို့သည်သူတို့ကနောက်ကိုလိုက်ရန်မျှော်လင့်ထား။ အကငျြ့မြား၏ code ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုစည်းမျဉ်းများ, ပညတ္တိကျမ်းနှင့်လေးစားခြင်းနှင့်အခြားလူများအပါအဝင်အပါအဝင်ကျနော်တို့အစီအစဉ်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အမူအကျင့်, အကြောင်းကိုအချို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပါရှိသည်။
လူငယျတစျယောကျအလေးအနက်ထားသို့မဟုတ်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့အကငျြ့မြား၏ code ကိုချိုးလြှငျ, ဝန်ထမ်းအခွအေနအကဲဖြတ်ရန်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ကျနော်တို့အစီအစဉ်ကိုစွန့်ခွာရန်အငယ်ရွယ်သူတစ်ဦးကိုမေးလိမ့်မည်။
အဆိုပါလုံခြုံမှုနှင့်သင်တန်းသားများ၏သုခချမ်းသာထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ NCS အဖွဲ့အစည်းတွေ, ကောလိပ် consortia, အလုပ်စေတနာ့ဝန်ထမ်း, အသိုင်းအဝိုင်း, လူမှုရေးလုပ်ငန်း (VCSE) နှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမိတ်ဖက်အပါအဝင်အတွေ့အကြုံများလူငယ်နှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများမှကွန်ယက်အားဖြင့်အင်္ဂလန်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်ကိုဖြတ်ပြီးလက်သို့အပ်သည်။ NCS န်ထမ်းများ DBS (CRB ယခင်က) check လုပ်ထားနှင့်လူငယ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သင့်လျော်သောလေ့ကျင့်ရေးရှိနေကြသည်။
လူအားလုံးတို့သည်လှုပ်ရှားမှုများပြည့်ပြည့်စုံစုံအန္တရာယ်-အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်လေ့ကျင့်သင်ကြားသင်တန်းပို့ချခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ကကြီးကြပ်ဖြစ်ကြပြီး program ကိုဒေသအလိုက်နှင့်တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ချပါအရည်အသွေးကိုဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်အဆိုပါ NCS နွေရာသီအစီအစဉ်ကိုနွေရာသီအားလပ်ရက်များတွင်နေရာအရပ်ကြာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုတောင်းဆောင်းဦးရာသီနှင့်နွေဦးအစီအစဉ်များကိုဆောင်းဦးသို့မဟုတ်နွေဦးတဝက်သက်တမ်းအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းမည်သည့်အချက်မှာနေရာတစ်နေရာယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ NCS နွေရာသီအစီအစဉ်ကိုနွေရာသီအားလပ်ရက်များတွင်နေရာအရပ်ကြာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုတောင်းဆောင်းဦးရာသီနှင့်နွေဦးအစီအစဉ်များကိုဆောင်းဦးသို့မဟုတ်နွေဦးတဝက်သက်တမ်းအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းမည်သည့်အချက်မှာနေရာတစ်နေရာယူနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပုပ္ပနိမိတ်တက်စာမကျြနှာကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ် 0114 2999 210 ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် e-mailing richard.r@element.li မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ NCS မန်နေဂျာရစ်ချတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားမှတ်ပုံတင်နိုင်